Kugara neInvestment yeBulgaria uye Golden Visa
● Kugara nekudyara kweBulgaria nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muBulgaria uye Magweta e Kugara neInvestment muBulgaria uye ma broker e real estate Residency zvirongwa muBulgaria zvinoshanda pamwe chete kuitira kuchengetedza kwevatengi.
Kugara nevemaInvestment vamiririri veBulgaria inopa rubatsiro rwekugara nekudyara muBulgaria, Residency nezvirongwa zvekudyara muBulgaria, Residency nehurongwa hwekudyara muBulgaria, yechipiri Residency nekudyara muBulgaria, mbiri Residency nekudyara muBulgaria, ugari uye ugari nekudyara muBulgaria. , Kugara zvechigarire nekudyara muBulgaria, Kugara kwenguva pfupi nekudyara muBulgaria, Kugara nehurongwa hwekudyara muBulgaria, Kugara nehurongwa hwekudyara muBulgaria, Citizenship nekudyara muBulgaria, Citizenship nehurongwa hwekudyara muBulgaria, Citizenship nehurongwa hwekudyara muBulgaria, wechipiri Citizenship nekudyara muBulgaria, hunyanzvi hwehukama nekudyara muBulgaria, kugara uye ugari nekudyara muBulgaria, kugara uye ugari nekudyara muBulgaria, hupfumi Citizenship zvirongwa muBulgaria, Ugari nehurongwa hwekudyara muBulgaria, Citizenship nehurongwa hwekudyara muBulgaria, chechipiri. pasipoti mu Bulgaria, yechipiri pasipoti zvirongwa muBulgaria, yechipiri pasipoti chirongwa muBulgaria, mbiri repiri pasipoti muBulgaria, pekugara uye yechipiri pasipoti muBulgaria, repamutemo repasipoti repiri muBulgaria, yechipiri pasipoti nekudyara muBulgaria, yechipiri ugari pasipoti muBulgaria, yechipiri pasipoti chirongwa Bulgaria, yechipiri pasipoti zvirongwa muBulgaria, visa yegoridhe muBulgaria, vhiza dzendarama muBulgaria, zvirongwa zvegoridhe vhiza muBulgaria, chirongwa chendarama vhiza muBulgaria, yechipiri vhiza vhiza muBulgaria, chechipiri vhiza vhiza chirongwa muBulgaria, mbiri yegoridhe visa muBulgaria, ugari uye vhiza yegoridhe muBulgaria, kugara uye vhiza yegoridhe muBulgaria, mugari vhiza mugari muBulgaria, chirongwa chendarama vhiza muBulgaria, zvirongwa zvendarama visa muBulgaria.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muBulgaria nerumwe rubatsiro.
Minimum Investment muBulgaria yeKugara nekudyara: EUR 512,000
Nhanganyaya Bulgaria uye Residency neInvestment
Bulgaria yakasarudzwa nevekuBritain vakasiyana-siyana vaida kudzokera kumusha kana kumasangano anoshanda padandemutande kubva pasi kuti vawane tsananguro yekuti mutero wavo waizove pasi. Imwe tsananguro iri kumashure kwesarudzo dzakaitwa nevanhu ava ndeye mutengo chaiwo wezvinhu zvekutanga muBulgaria.
Bulgaria ndiyo nyika ine pekugara zvine mwero, nzvimbo dzekudyira, uye michina yekumba inopesana neakasara eEuropean Union.
Kutamira kune imwe nyika iri kure kazhinji kunoreva kuchinjira kune imwe nzira yehupenyu. Nekudaro, muchiitiko chekuti iwe uri kuenda kuBulgaria, zvakanaka kuti uzive nezve mararamiro evagari vayo uye zuva nezuva hunhu. Iwe unozo cherekedza tsika, magariro, uye mhemberero dzakaomarara. Asi, zvakapfuura izvozvo, ivo vane simba rakatanhamara zvakare, vakabatikana pabasa uyezve nekuwana mumwe mukana wakanaka wekuzorora, semuenzaniso, hove, mitambo yechando, zviitiko, nezvimwe
Nepo mhemberero shoma dzichirumbidzwa pamazuva akajeka, dzimwe dzinotenderera pasita. Kana iri Krisimasi, inorumbidzwa muzvikamu zviviri, chekutanga mangwanani e24 Zvita uye chechipiri musi wa25 Zvita pachaperi kuchiteverwa nekudya kwemasikati kunofadza.
Kutaura chokwadi, tsika shomanene chiripo dzichiri kutariswa kunyangwe hazvo iyo Bulgaria ikozvino yaumba nyika inocheka.
Vazhinji veBulgaria vanoshandiswa kuenda kumahombekombe egungwa uye nekukoshesa chikafu.
Kune vanhu vazhinji, iyo nzira yehupenyu inoperekedza kugara muBulgaria ndiyo inonakidza kwazvo. Kutandara pamahombekombe egungwa mukupera kwechirimo, kutsvedza muchando munguva yechando, kutamba gorofu, uye kufamba-famba mumakomo zvese zororo rezororo raunogona kukoshesa. Chiitiko chikuru cheBulgaria chinopa mikana mitsva yakawanda.
Makwai nembudzi zvinodzungaira pachena zvakapoterera muminda isina madziro, uye vazhinji vanogara munharaunda vanogadzira zvavo zvigadzirwa kumba. Asi, apo kugara muBulgaria kuri kufadza, kune mamwe matipi ekuchengetedza ekuziva nezvazvo. Mapiketi anoshanda munzvimbo dzeguta uye nzvimbo dzevashanyi, kunyanya munzvimbo dzakazara dzakadai sekufambisa uye nemigwagwa inogarwa. Pakave nekuwedzera kuwedzera mukuba kubva kunzvimbo dzekugara munzvimbo dzinozivikanwa dzekufamba. Bulgaria inoshanda danho rebasa rezvemari iro iro rega rega uye remakambani emitengo yemitengo mu2011 vari 10% mune zvese zviitiko. Kune chero munhu anotarisira kudzikisira chiyero chebasa chaanobhadhara pamubhadharo wavo kana bhizinesi mabhenefiti nenzira iyi, Bulgaria inokwezva zvechokwadi!
Bulgarian pekugara uye eatery mutengo zviri pachena pasi pechikamu chikuru cheyakajairwa iyo EU.
Mari yezvivakwa muBulgaria yakadzikama kubva kumatanho avo zvichitevera kukwidziridzwa kweEU - zvichireva kuti zvinogona kufungidzirwa kutenga zvirinani pasirese, (kunze kwenzvimbo dzinoverengeka dzinosarudzika dzekuSofia), zvakanyanyisa kudarika zvaungabhadhare muUK kuitira mukana wakaenzana. . Kubhadhara muBulgaria pane zvakajairwa ndeye 74.06% yakaderera pane kuUK.
Kazhinji kuedza kushoma kwekurarama idhirowa yakakura. Vaya vari pamudyandigere vanogona kuona kuti yavo yemari inobhadharwa inopfuurira mberi muBulgaria - uye vanogona kuwana pundutso nekufamba sezvo ivo vasingazove pasi pehupfumi hwepedyo kuvapa chouviri.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeBulgaria
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muBulgaria
Kugara nekudyara kweBulgaria
Kutora nguva yekugara nekudyara kweBulgaria
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweBulgaria
Nei uchienda kune Residency nekudyara kweBulgaria
Bulgaria inhengo yeEuropean Union uye ichave nhengo yeSchengen zone mune ramangwana riri pedyo. Nekudaro nyika inopa inoyevedza vhiza chirongwa. Ugari hweBulgaria hunogona kukupa iwe kodzero yekufamba-famba muEurope usina vhiza. Mushure memakore maviri ekugadzirisa nguva iwe unozogona kunakirwa nezvakanaka zvekugara zvachose muBulgaria. Zvakanakira izvi zvinosanganisira mitero yakaderera, kusvika kumusika weEuropean Union uye zvimwe zvakawanda. Kuti uwane chizvarwa cheBulgaria haufanire kuziva mutauro kana kuva nezvivakwa. Mushure mekuwana ugari hweBulgaria iwe unogona kufamba nyore uye kugara mune chero eEU nyika.
Iwo mabhenefiti eBulgaria anogara kwekugara anoshandiswa kune vese nhengo dzemhuri. Mushure mekuwana pekugara muBulgaria mukadzi / mukadzi wako nevana vanogona zvakare kuwana kugara kweBulgaria kunoenderana nekubatanidzwazve kwemhuri.
Kugara nehurongwa hwekudyara muBulgaria insite
Iwe unotanga kuva pekugara zvachose kusvika pamwedzi mipfumbamwe. Munguva iyoyo iwe unofanirwa kushanyira Bulgaria kaviri uye iyo Bulgarian Consulate iri munyika mako. Mushure mekugadzirira kwefaira rako, iwe unozofanirwa kutumira mari yekudyara yeBGN 1 mamirioni (EUR 512,000). Kana chitupa chekudyara kwako chikapihwa unogona kunyorera yeD mhando yeVisa. Paunotora vhiza yako, unoshanyira Bulgaria uye wotumira kunyorera. Inotevera nguva yaunoshanyira kuti utore yako yekugara kadhi. Mushure mekutora kadhi rako rekugara zvachose, nhengo dzemhuri yako dzinogona kuwana yavo nekutumira fomu rekunyorera. Iye anenge achinyorera achazodiwawo kushanyira Bulgaria kaviri.
Unofanirwa kuisa BGN 1 miriyoni (maAppr. EUR 512,000) muHurumende yeBond Portfolio kwenguva yemakore mashanu. Mushure memakore mashanu iwe unozodzosera mari yako zvisinei pasina mubereko. Hurumende yeBulgaria inovimbisa kuti iwe unozodzosera mari yako mushure menguva yapera. Huwandu hwekudyara hunogonawo kupihwa mari nebhanga reEuropean. Mari yekugadzirisa yeEUR 5 inoshanda. Mari yekuwedzera inogona kudikanwa kune vana vasiri 5. Mari yevana ichave EUR 25,000.
Mutengi kutsigira Residency nekudyara kweBulgaria
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents eBulgaria uye Residency ne Investment Lawyers yeBulgaria inopa vatengi uye mhuri dzavo muBulgaria nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuBulgaria, kugara nekudyara kubva kuBulgaria uye mimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara yeBulgaria, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yeBulgaria, inokwanisika inivhesitimendi inzvimbo yekuenda kune dzimwe nyika vanokumbira yeBulgaria, inokwanisika Residency nevarairidzi vezvekudyara veBulgaria, inokwanisika Kugara nemagweta ekudyara eBulgaria uye inokwanisika yekufambisa inowona yekufambiswa femu yeBulgaria.
Kugara nekudyara kubva kuBulgaria kuenda ku37 Nyika.
Kugara nehurongwa hwekudyara kubva kuBulgaria.
Kugara nekudyara kweBulgaria kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvekudyara zvivakwa muBulgaria nemaonero ekuti mutengi anofanira kuwana kudzoka kwakanaka pane kudyara muBulgaria, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwavakaita kwavo kweKugara kwavo nekudyara kweBulgaria. Isu tinosungirirwa nevashoma vashambadziri vezvivakwa muBulgaria vane rekodhi rekodhi uye yavo midziyo iri munzvimbo dzakanaka muBulgaria, vachitora zvakanakanaka kudzoka.
Unoda kuziva - Bulgaria Residency neInvestment
Kugara neInvestment Gweta reBulgaria rinopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Kugara nekudyara kuBulgaria. Yedu yakajairwa masevhisi ekugara neInvestment kuBulgaria inosanganisira:
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Residency nekudyara kweBulgaria kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yeBulgaria uye kudzikisa njodzi yekuramba.
Kuti isu tifambire mberi neako Residency nekudyara kunyorera kweBulgaria isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye nhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera kweBulgaria. Magweta edu akasarudzika e Residency nekudyara kweBulgaria uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zve Residence nekudyara kunyorera kweBulgaria zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvakakodzera zveBulgaria.
Kamwe chikumbiro chako cheKugara nekudyara kweBulgaria chikatenderwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye tobva tatanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Residency nemasevhisi ekudyara muBulgaria kune vakataurwa pazasi Vanhu kana mabhizinesi muBulgaria:
Residency nebasa rekudyara kweBulgaria hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovera maoko nezvombo kubva kana kuenda kuBulgaria.
Residency nezvirongwa zvekudyara zveBulgaria hadzipi kupihwa kweTechnical kuongororwa muBulgaria kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuBulgaria.
Residency nekutsvaga kwekudyara kweBulgaria hadzipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana tsotsi zviitiko muBulgaria.
Residency nerutsigiro rwekudyara yeBulgaria haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muBulgaria.
Residency nebasa rekudyara kweBulgaria haisi yemabhizinesi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiriya kana zvombo zvenyukireya muBulgaria.
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweBulgaria haruwanikwe kune vanhu veBulgaria inobata mukutengesa, kuchengetedza muBulgaria, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara yeBulgaria haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa yeBulgaria haisi yezvitendero zvechitendero uye masangano avo muBulgaria.
Residency nebasa rekudyara mu Bharugeriya haina kupihwa kune vanhu vari kuita Zvinonyadzisira muBulgaria.
Kugara Kwedu magweta muBulgaria haitsigire bhizinesi rekutengesera mumidziyo yezvinodhaka muBulgaria.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veBulgaria neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekuramba chero kupi zvako kubva kuzviremera muBulgaria kubvumidzwa kwekunyorera Residency nekudyara muBulgaria.
Kugara nekudyara muBulgaria uye kune dzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro muBulgaria yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muBulgaria.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye neBulgaria zvinodiwa nemutemo, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nemabasa ekudyara kweBulgaria inopa mitengo yakachipa, ine chinzvimbo chinobudirira cheBulgaria.
Isu takatora makore eruzivo rwevaviri Residency kuBulgaria inotsigira vatengi uye mhuri dzavo kuBulgaria.
Ruzivo Rwokugara nevekudyara kukumbira veBulgaria uye vamiriri vepamutemo veBulgaria vachipa rutsigiro kune vatengi.
Pamberi pekugara kwako kweBulgaria uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro ichave iriko kune bhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuBulgaria
Isu tine ruzivo rwepasirese muResidency nekudyara kusanganisira Bulgaria, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuBulgaria kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuBulgaria
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kweBulgaria ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veBulgaria, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kweBulgaria uye zvimwe zvikwereti.
Kugara neInvestment muBulgaria uye Mamwe maSevhisi
Kunze kweResidency nekutsvaga kwekudyara kweBulgaria, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muBulgaria, iyo iwe yausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nevamwe vapi vamazano eBulgaria ichitigadzira one-stop shop yeBulgaria uye nyika dze106.
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kweBulgaria nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga-kumusoro muBulgaria nepasirese.
Mushure meResidency nekudyara ku Bulgaria kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga ravepo bhizinesi muBulgaria kutanga pakarepo muBulgaria.
Mushure meResidency nekudyara kuBulgaria, setup bhizinesi mu Bharugeriya.
Magweta eResidency neInvestment muBulgaria
Isu tinopa Residency zviri pamutemo neInvestment mhinduro dzeBulgaria uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuBulgaria, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo yeBulgaria ine vamiririri vekupinda zvakanaka muBulgaria, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa vatengi sevhisi yeBulgaria ne kujekesa nzira dzekudyara dzekugadzirisa vanhu veBulgaria nemhuri dzavo. Yedu Residency neboka rekudyara kweBulgaria inopa mhinduro dzakagadzirirwa kubudirira kweVatengi.
Simba regweta reBulgaria rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevamiriri vezvekudyara muBulgaria. Kana iwe uri muBulgaria kana waronga kushanyira Bulgaria, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muBulgaria
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweResidency nekudyara muBulgaria?
Kuderera kushoma kweResidency nekudyara muBulgaria iri EUR 512,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuBulgaria yeResidency nekudyara here?
Ehe, gweta redu muBulgaria uye vamiririri muBulgaria vanopa rutsigiro rwekugara zvakare nekudyara muBulgaria.
Kugara nekudyara kuBulgaria kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuenda kuBulgaria uye Residency nemari yekudyara zvinodiwa zveBulgaria ndeye yakakwira mitezo yakakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete mari yekubvunza yeResidency neInvestment kuenda kuBulgaria, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvinotsigira zveKugarazve neMhinduro dzeInvestment
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Residency nekudyara kuBulgaria kana investor visa kuBulgaria?
Kugara nenzvimbo dzekudyara mabasa anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuBulgaria kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuenda kuBulgaria kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuenda kuBulgaria kubva kuEurope, Residency nekudyara kuenda kuBulgaria kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuBulgaria kubva kuMalaysia, Kugara nekudyara kuBulgaria kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuBulgaria kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuBulgaria kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuBulgaria kubva kuNepal, Kugara nekudyara kuBulgaria kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuBulgaria kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance yeBulgaria
Kumbira kubvunza Mahara kune yako Residency neInvestment kuBulgaria
Mazwi akakosha muRudzi rwekugara neInvestment yeBulgaria